MARKAAD QODO BASASHA, BASASHA NADIIFINTA SARIIRAHA - BOW
Markaad qodo basasha, basasha nadiifinta sariiraha
Tirada iyo tayada dalagyada la goostay, iyo sidoo kale ilaa inta la kaydin doono, waxay ku xiran tahay inta badan goynta saxda ah ee basasha.
Taasi waa waxa aan ka wada hadli doonno maqaalka.
Marka khudradda laga saaro sariiraha
Sida cagaarka ugu badan, basasha waa in la saaraa marka ay si buuxda u bislaadaan. Kaliya kiiskan, waxaan ku tirin karnaa ilaalinta dhadhanka iyo kaydinta muddada fog ee khudaarta. Hadda waxaan baran doonaa dhawr siyaabood oo lagu ogaanayo waqtiga goosashada.
Calaamadaha dibadda ee qaangaarka
Waxaa jira dhowr calaamado dibadda ah oo qeexi kara heerka dillaaca dalagga. Astaanta koowaad waa maqaarka iyo boogaha dhintay. Laakiin haddii xagaaga ahaa qabow iyo qoyan, ka dibna calaamad noocan oo kale ah way adkaan doontaa in la sugo. Calaamad labaad - Tani waa qoorta qalajinta ee guluubka. Waa hagaag, si fiican calaamad saddexaad go'aamiyey diirka oo ka soo baxa dhulka: waa inay noqdaan kuwo engegan oo diirran.
Basasha sida basasha iyo nematodes waxay si weyn u yareeyaan dhalidda dalagga.
Habka ugu saxsan ee lagu ogaanayo wakhtiga goosashada basasha ayaa caan ku ah habka xisaabeed. Waxay ku taalaa xaqiiqda ah in laga bilaabo taariikhda beerto waxaa laga tiriyaa 70 ilaa 80 maalmood - taasi waa ilaa intee le'eg ee Bisaylkiisa ee khudradda socda.
Waa muhiim! Markaad dooranayso habkan, waa inaad tixgelisaa xaaladaha cimilada. Haddii xagaaga ay qalalaan, markaa nadiifinta waqti yar ayaa la dhimi karaa. Haddii xagaaga uu ahaa roobab, ka dibna nadiifinta waa in dib loo dhigaa.
By kalendarka labiska
Sida laga soo xigtay dad badan oo booqashooyin ah beeraha beeraha, kaaliyaha ugu wanaagsan ee doorashada xilliga goosashada ma aha xitaa cimilada dibedda, laakiin jadwalka kaluunka. Haddii ay joogaan, waxaad awood u yeelan doontaa inaad ogaato marxaladaha ugu fiican ee bisha si loo soo ururiyo basasha iyo dhir kale.
Haddii aadan haysan jadwalkaas oo kale, markaa waxaad dhageysan kartaa caqiidada caanka ah in goosashada ay ka fiican tahay dayax full. Waxaa la aaminsan yahay in muddadan, miraha ay leeyihiin qiimaha nafaqada ugu sarreeya.
Goorta la nadiifiyo iyo sida loo qodo basasha sariiraha
Caadi ahaan, khudradda ayaa la goostay dabayaaqadii July iyo horraantii Agoosto ee cimilada qorraxda. Waa lagama maarmaan in si sax ah loo go'aamiyo waqtiga ururinta. Haddii aad goosashid goor hore, miisaanka miisaanka ee miro saaran ma heli doono wakhti si buuxda u sameeya, oo qoorta qarxa way sii jiri doontaa. Iyo haddii aad soo daahdo, khudradda canbaarta. Laakiin waa muhiim in la tixgeliyo astaamaha kala duwan.
Haddii xilli la qasay, iyo bilowga goosashada caleemaha khudradda weli waa cagaaran, markaa waa in aan si deg deg ah loo gooyin - basasha waa inay jiiftaa 7 illaa 10 maalmood oo hoosta hoostiisa ah iyo bislaadaan. Ka dib markii caleenta caleenta, waxaa laga saari karaa.
Goynta basasha waa in la sameeyaa laga bilaabo Agoosto - Waqtigan xaadirka ah dhulku waa qallajiye, mana jirto baahi loo qabo in la nadiifiyo nalalka waqti dheer. Qaadista qaanso dhulka ah waa in si taxaddar leh loo sameeyaa: haddii aad jeexdid dushooda dushooda, way kala jajabi doontaa, sidaa daraadeed waxa ugu wanaagsan in lagu qodo fargeeto ama fargeeto beerta. Haddii dhulka uu ku jiro midhaha, waxa fiican inaad ku nadiifiso gacmahaaga, inaad garaacdo midba midka kale ama ka soo horjeeda walxaha adag - sababtoo ah dhaawaca farsamada nalalka caleemaha.
Waxaad xiiseyn doontaa inaad ka akhrido sida ay u koraan basasha iyo noocyada ugu fiican ee basasha.
Leek, kaas oo loogu talagalay kaydinta, la soo kordhay horraantii Oktoobar. Si basasha loo yareeyo, 14 maalmood ka hor ururinta, xididada waa in lagu daboolaa dhulka ama lagu daboolo caag ah. Ka dib markii caleenta la qodo, xididdada ayaa u baahan in la gaabiyo 1 ama 2 cm, caleemaha waxaa la gooyaa 2/3 oo dherer dhan. Waxaad ku keydin kartaa dhulka hoostiisa (ciidda), qaboojiyaha ama xataa barafoobay.
Kusoo dhawoow dhammaan waxyaalihii beeraha ubaxa.
Akhri sidoo kale sida loo koro soodhada.
Isku day inaad jeceshahay laga bilaabo bilawga illaa badhtamaha Ogosto ka dib markii baadaraad jilicsan oo engegay. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu qodo caawimada fargeeto ah, waxaadna jiidi kartaa haddii dhulka uu jilicsan yahay. Saaxiibka la kariyay waxaa lagu qalajiyaa sariir ku dhowaad 3 asbuuc, waa in si joogta ah loo isku qasan yahay. Ka dib markii midhaha si fiican u qalajiyey, waxaad u baahan tahay inaad jarjartaa dushooda.
Waa muhiim! Haddii inta lagu jiro mudadaas marka basasha ay qallalan yihiin, roobabku waxay bilaabanayaan, waxay u fiicantahay in ay ku qallajiso hoosteeda hoosteeda.
Calaamadee beeraha doofaarka.
Sida caadiga ah, xididdadu waxay u dhaqmaan si ka dhakhso badan basasha, sidaas darteed bilaabaan inay ka soo ururiyaan laga bilaabo bartamihii July muddada caleemaha ay bilaabaan inay qalalaan. Nidaamka nadiifinta waa mid la mid ah basasha. Qodobada caleenta ah ayaa loo qaybiyaa nalalka shakhsiga ah, ka dibna jarjar cagaarka cawska oo si fiican u qalajiyey qorraxda.
Ma taqaanaa? Macluumaadka koowaad ee ku saabsan dhuudhku wuxuu u muuqday qarnigii 13aad.
Sida loo dedejiyo geedi socodka beergooyska
Basasha waxay ka mid yihiin dalagyada daaqa muddo dheer, iyo waqtiga goosashada ee khudraddaas badanaa waxay hoos u dhacdaa xilliga roobka, taas oo saameyn xun ku leh kaydinta. Sidaa darteed, waxaa jira baahi loo qabo in la dedejiyo habka Bisaylkiisa.
Basasha biyaha waxay joogsadaan laba ama saddex usbuuc ka hor goosashada, xitaa xaaladaha abaarta. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in qoyaan badani ay yareeyaan nolol maalmeedka miraha, marmarka qaarkoodna waxay keenaan koritaan cusub. Sidoo kale, si looga fogaado waraabka roobka, dadka waxaa lagula talinayaa in ay daboolaan sariirta beerta leh basasha leh bac quraarad ama dhar qaro leh.
Si loo yareeyo dejinta biyaha iyo nafaqooyinka ka soo baxa ciidda, dhirta waa in la qaado iyada oo loo adeegsanayo fargeeto ama fargeeto beerta, iyada oo aan waxyeeleynin midhaha. Waxaa sidoo kale jira hab marka nalka uu ka soo baxo dhulka kala badh oo ka tagay foomkan 5 maalmood, ka dibna gebi ahaanba laga saaro ciidda.
Waa muhiim! Codso habkan keliya ee cimilada qallalan iyo ciidda jilicsan.
Habkani wuxuu ku caawin karaa oo kaliya haddii aad beeraha ku beeray qoto dheer. Nidaamku waa mid aad u fudud: waxaad u baahan doontaa inaad ka saarto lakabka ugu sareeya ee carrada leh gacmahaaga ama spatula yaryar si aad u hagaajiso hawada iyo qalajinta geedka qorraxda.
Basasha waa deriska wanaagsan - xididdo, kaabajka, karootada, salaar, yaanyo, baradhada, strawberries iyo qajaar. Deriska xun ee basasha ee beerta - digir, digirta iyo sage.
Sida loo diyaariyo basasha kaydinta
Goorta iyo sida loo bakhtiiyo basasha, waxaan horay u bartay, laakiin ugu muhiimsani waa diyaarinta kaydinta xilliga jiilaalka. Diyaarinta khudradda waa qalajinta habboon. Haddii aad fursad u leedahay maalin kasta inaad booqato bogga, waxaad si toos ah ugu qalajin kartaa beerta muddo 7-8 maalmood ah. Waxaad sidoo kale qallajin kartaa nalalka qolka leh hawo wanaagsan, adoo xiraya guntan. Guryaha dhexdiisa, miro ayaa loo qalajin karaa foornada ugu yaraan habka kuleylka. Waa muhiim in la hubiyo in basasha aan la dillaacin.
Ma taqaanaa? Ka hor inta aadan khudradda ku ridin khudradda, waxaad u baahan tahay inaad ka saarto kuwa waxyeelloobay, iyo sidoo kale miraha la kariyey.
U hoggaansanaanta xeerarka fudud ee nadiifinta iyo qallajinta basasha waxay kaa caawineysaa inaad hesho dalag tayo leh isla markaana ku kaydiso waqti dheer.